Ranona vahona + letisia : Misoroka aretin’aty !
Tena mahasalama izany ny zava-pisotro vita amin’ny vahona. Tsara ho an’ny aty izy ity, misoroka izay aretina mety hahazo azy, miady amin’ny fitohanana ihany koa ary manadio ny hoditra. Indro ny zava-pisotro vita amin’ny vahona izay mora karakaraina sady tena mahasalama.
· Rano 30 sl
· Ranona letsia 15 sl
· Dintina vahona 50g
· Voasarimakirana maitso 1
Ø Rehefa madio tsara ny vahona dia zaraina manaraka ny halavany.
Ø Atsangana ao anaty vera misy rano mandritra ny minitra vitsy izany.
Ø Rehefa izay dia averina kobanina indray ary esorina ilay tsilo amin’ny sisiny ary esorina koa ny hodiny.
Ø Rehefa afaka ny hoditry ny vahona dia kobanina indray izay dintiny azo eo ary potehina amin’ny “mixeur”.
Ø Aorian’izay dia alefa ao anaty tavoahangy ilay dintina vahona ary araraka ao ihany koa ny ranom-boasarimakirana, ny ranona letisia ary ny rano.
Ø Ahontsakontsana mba hifangaro tsara.
Ø Tehirizina ao anatin’ny vata fampangatsiahana ary sotroina ao anatin’ny 2 andro.
· Betsaka dia betsaka ny rano ao anatin’ny vahona. Manampy ireo olona izay sendran’ny tsy fahampian-drano ny vahona araka izany. Tena tsara ho an’ireo mpanao fanatanjahantena ihany koa izy ity satria mamerina ao anatin’ny fotoana fohy ny rano very noho ny hatsembohana be loatra.
· Mahasalama ny aty ihany koa ny vahona. Miasa bebe kokoa mantsy ny aty rehefa ampy rano sy sakafo tsara ny vatana.
· Manampy be dia be an’ireo mitohana ihany koa ny zava-pisotro vita amin’ny vahona satria vokatry ny tsy fahampian’ny rano ao anatin’ny vatana no mahatonga azy io. Araka ny efa voalaza teo anefa dia mamerina haingana ny rano ao anatin”ny vatana ny vahona.
· Manadio ny hoditra ny zava-pisotro vita amin’ny vahona. Miady amin’ny mikraoba izay mahatonga ny mony sy aretin-koditra isan-karazany mantsy izy ity.